Isiphatho esinemigca esinebhedi yokuzoba kabini esecaleni kwebhedi ikhabhinethi yecala leenkuni # 0121 Ukwenziwa kunye nefektri | Yamazonhome
Isibambo esimagqagala somzobo ophindwe kabini webhedi yikhabinethi esecaleni kweenkuni # 0121
Igama: Indawo yasebusuku
Inombolo yomzekelo: Amac-0121
Ubukhulu: 450mm * 400 * 470mm
Amakhulu-khulu eminyaka ikhabethe yesiko yeTV
Kukhethwe i-oki emhlophe evela eMntla Melika. Ifenitshala eyenziweyo ayimelani nefuthe, ukukhuhlana, ukubola, kulula ukomisa, ukukhubazeka kancinci, kulula ukwakha, kwaye kulula ukunamathela. Izinga lokuncipha lincinci kakhulu, ukuze lisetyenziswe kwimeko yemozulu eguqukayo ngaphandle kokuqhekeka kunye nezinye iingxaki. Yimpahla efanelekileyo yefenitshala.
Uyilo lwe-chamfer olujikelezayo
Iikona zekhabhinethi zijikelezwe kwaye zigudile, kwaye unonophelo lokhuseleko lwakho kunye nosapho lwakho kubuqhinga. Ioyile yendalo yemifuno ityikitywa ngesandla kwaye iyasetyenziswa, esempilweni kwaye inobuhlobo kwindalo, ngaphandle kwevumba elikhethekileyo. Umbala uguqukile kwaye utyebile, unokuchukumiseka, kwaye awuchaphazeli ubuhle beenkozo zendalo zomthi. Iyaziwa njenge "indibaniselwano yegolide" yefanitshala eqinileyo yomthi.
Itafile ezimbini zebhedi esecaleni kwebhedi enesiphatho esimanzi
Uyilo lwahlulwe lwaziidrowa ezimbini kwaye akukho gumbi lokugcina. Kuyafaneleka kubahlobo abathanda ukufaka izinto kwikhabhinethi ukugcina ukubonakala kwe-countertop kuhlambulukile. Yenza indawo yokugcina eyimfihlo efanelekileyo kuwe. Xa kuthelekiswa nesiphatho esivelileyo, isibambo esine-grooved sinokuthintela ukukrwela kunye nokutsala ngokulula. Ayisiqinisekisi kuphela inkangeleko elula kunye nefashoni, kodwa ayisiyikisi ukhuseleko lwakho.
Isilayidi seDovetail Tenon Fusion Solid Wood
Inkqubo yedrowa yokufa kunye nenkqubo ye-tenon idityaniswe nomgaqo oqinileyo wesilayidi somthi, inkqubo yendabuko yaseLuban, ukuba isetyenzisiwe ixesha elide, yomelele kwaye igudile. Ukuphucula isakhiwo se-drawer esixhumene ngqo, ukwenzela ukuba idrowa ibe namandla okugcina umthwalo kwaye akukho mngcipheko wokuqhekeka. Itafile esecaleni kwebhedi icwecwe kakuhle macala onke, ngaphandle kwebarb, kwaye inobunewunewu obucekeceke kunye nokuthamba. Awunakukhathazeka ngokukrwela xa ubeka iimpahla zakho.
Inqina elinye leenkuni ezomeleleyo imilenze zizinzile
Imilenze eqinileyo yomeleleyo, uyilo olumi nkqo, uyilo oluthwala umthwalo wesayensi kunye nonxibelelwano oluzinzileyo kunye ne-desktop, i-18cm ngaphezulu komhlaba ogcinwe indawo ecocekileyo. Ukuthamba okuziva emazantsi omlenze kungatyibiliki kwaye kunxiba okunganyangekiyo, kwaye uyilo lomntu alunakukhusela umgangatho kuphela kwimikrwelo, kodwa kunye nelahleko yomlo wemilenze yomthi. Uyilo lomlenze olunye lwenkuni lwenza ukuba umthwalo uthwale uzinze.
Egqithileyo I-China Factory i-8M 10M enemibala eQulunqileyo yoMoya oQhelekileyo wePhuli yokudada i-Yoga Mat 0395
Okulandelayo: Igumbi elinye lokulala nekhabhathi esecaleni # 0122
Igumbi lokulala elinebhedi eyodwa elinecala elinye ...
Ukukhanya iitafile marble lokutyela combina elula ...
Iibhodi eziQinisekisiweyo zeNkuni zikaSis Cat Cat 0237
High-Grade Dog uKennel Solid Wood Isakhelo Pet Ibhedi ...